March 2, 2020 Zayar Phyo Han La Liga 0
မနညေ့ရဲ့အယျကလကျစီကိုပှဲစဉျမှာ ရီးရဲလျနောကျခံလူမာဆယျကို ပွိုငျဘကျတိုကျစဈမှုးမကျဆီကို အရေးပါတဲ့ဖကျြထုတျတားဆီးမှုပွုလုပျနိုငျခဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး ဂိုးသှငျးလိုကျသလို အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲမှာ ရီးရဲလျဟာ ခနျြပီယံပွိုငျဘကျဘာစီလိုနာကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျရပွီး လာလီဂါအမှတျပေးဇယားထိပျနရောကို ပွနျလညျတကျလှမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ရီးရဲလျက ၁-၀ ဂိုးနဲ့ ဦးဆောငျနခြေိနျမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးခေါငျးဆောငျမကျဆီဟာ ဂိုးသမားကျောတှိုကျဈနဲ့ တဈယောကျခငျြးတှမေ့ယျ့အနအေထားနဲ့ ပွနျလညျခပြေနိုငျမယျ့အခွအေနရှေိခဲ့တာပါ။ ဒါကို မာဆယျလိုက ဆလိုကျထိုးဖကျြထုတျတားဆီးလိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွနျထတဲ့အခြိနျမှာ သူဟာ ပရိသတျတှဘေကျလှညျ့ကာ လကျသီးလကျမောငျးတနျးပွီး ဂိုးသှငျးလိုကျသလို အောငျပှဲခံခဲ့တာပါ။
La celebración con rabia de Marcelo. Le ganó la acciónaMessi. #TodoUnClásico pic.twitter.com/qcHqWXro5M
အဲဒီဝါရငျ့ဘရာဇီးနောကျခံလူဟာ အယျကလကျစီကိုပှဲတှမှော နှဈပေါငျးမြားစှာကွာကစားလာခဲ့သူဖွဈလို့ ဒီလိုပှဲမြိုးမှာ သူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံက အရေးပါခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အဲဒီပှဲမှာ မာဆယျလိုဟာ မကျဆီထကျလညျး ပိုမွနျအောငျပွေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီက တဈနာရီ ၂၉.၅ ကီလိုမီတာပွေးနိုငျခြိနျ ၃၁ နှဈအရှယျ မာဆယျလိုဟာ တဈနာရီ ၃၀.၉ ကီလိုမီတာပွေးနိုငျခဲ့တာပါ။ မာဆယျလိုရဲ့အဲဒီအရေးပါတဲ့ဖကျြထုတျမှုနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး ဆိုရှယျမီဒီယာထကျမှာ ခြီးကြူးနကွေပါတယျ။
မက်ဆီကို ဖျက်ထုတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ဂိုးသွင်းလိုက်သလိုအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ မာဆယ်လို
မနေ့ညရဲ့အယ်ကလက်စီကိုပွဲစဉ်မှာ ရီးရဲလ်နောက်ခံလူမာဆယ်ကို ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှုးမက်ဆီကို အရေးပါတဲ့ဖျက်ထုတ်တားဆီးမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂိုးသွင်းလိုက်သလို အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ရီးရဲလ်ဟာ ချန်ပီယံပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီး လာလီဂါအမှတ်ပေးဇယားထိပ်နေရာကို ပြန်လည်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလ်က ၁-၀ ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်နေချိန်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင်မက်ဆီဟာ ဂိုးသမားကော်တွိုက်စ်နဲ့ တစ်ယောက်ချင်းတွေ့မယ့်အနေအထားနဲ့ ပြန်လည်ချေပနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိခဲ့တာပါ။ ဒါကို မာဆယ်လိုက ဆလိုက်ထိုးဖျက်ထုတ်တားဆီးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ထတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ပရိသတ်တွေဘက်လှည့်ကာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ဂိုးသွင်းလိုက်သလို အောင်ပွဲခံခဲ့တာပါ။
အဲဒီဝါရင့်ဘရာဇီးနောက်ခံလူဟာ အယ်ကလက်စီကိုပွဲတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာကစားလာခဲ့သူဖြစ်လို့ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံက အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီပွဲမှာ မာဆယ်လိုဟာ မက်ဆီထက်လည်း ပိုမြန်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီက တစ်နာရီ ၂၉.၅ ကီလိုမီတာပြေးနိုင်ချိန် ၃၁ နှစ်အရွယ် မာဆယ်လိုဟာ တစ်နာရီ ၃၀.၉ ကီလိုမီတာပြေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ မာဆယ်လိုရဲ့အဲဒီအရေးပါတဲ့ဖျက်ထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာ ချီးကျူးနေကြပါတယ်။
အယျကလကျစီကိုက ဗငျနီစီးယကျဈရဲ့အဖှငျ့ဂိုးအတှကျ အောငျပှဲခံခဲ့တဲ့ စီရျောနယျဒို